Beeraha Somaliyeed - BAARGAAL.NET
baro dhulkaaga beeraha taariikh
✔ Admin on June 27, 2011 0 Comment
Dalaga beeraha Soomaaliya dhan farsamo iyo ka faa’iidaysi buuxa, wuxuu wali marayaa halkii uu marayay 60 sano ka hor. Waxaana runtii la dhihi karaa hoos u dhac baaxad leh ayaa ku timid ilaa xiligii uu bilowday dagaalkii sokeeye.
Beeraha Degmada Baardheere iyo guud ahaan Gobolka Gedo dhamaan dalagyada hoose way ka baxaan. Waxaa Soomaaliya ka baxa dhamaan dalagyada hoos ku taxan iyo kuwo kale. Webiga Jubba iyo Webiga Shabeelle ayaa waraabiya beeraha dalka kuwooda wax soosaarkoodu gaarsisanyahay xiligiiba sida deyr ama gu’ cadad kumanaan metric ton ah.
Bulshada Soomaaliyeed waxaa ayaandaro u ah inaysan mar kaliya isku raacin inay ku qanacdo waxa dhulkeeda ka baxa. Inta aanan la gaarin nolol iyo helitaan adeega qalab iyo aaladaha nolosha sahla, waxaa Soomaaliya lacagtii ka dhamaystay cuntada oo inta badan dhoofin ku timaada. Wadamada dariska nala ah waxay quraacda aroortii, qadada maalinimada, cashada habeenkii iyo marti qaad oo dhan isticmaalaan waxa wadankooda ka baxa. Ururo iyo iskaashato beeralay Soomaaliyeed afkaartaas horumariyana wali nooma dhalan.
Cuna malaayga waa shay macaane, iyo Aan beero falanoo baahida aan ka baxnee, ayaan ugu dhawayn wacyigelinta inaan nolol ka dhigano waxa Alle na siiyay oo runtii barwaaqo aan la soo koobi karin ah. Ma ogtahay Kiinya oo dadaal badan, dadkeeduna wacyi qabaan in canbaha bar kaga yimaado Soomaalia?
Kiinya galay la habeeyay oo jariir laga dhigay oo ugaali la yiraah ayaa maalin walba warka idaacadaha lagu soo qaataa dowladana kaga hadashaa qorshe walba oo ay leedahay.
Itoobiya canjeero aad u balaaran oo qofka 3 xaboo kaliya kaafisa oo laga sameeyo ama loo yaqaan daafi ayaa la cunaa xili walba oo cunto-saddexda galinba.
Dhanka wadankeena, dalagyadaan mid walba midka kale wuu ka abuur sahlanyahay. Muuska ayaa ugu abuur sahlan. Laan baxaysa ayaa inta la soo gooyo dhulka laga taagaa ka dibna la waraabiya halkaasna geed kale oo wayn u noqon mudo yar ka dib, badiyaa 2 sano.
Bataatiga ama baradhada waa dalag cuntada daruuriga ah ka mid balse Soomaaliya kama baxo oo dhoof ayaa lagu keenaa. Walow cimilada kulaylaha ah ee dhulka beeralayda ee Soomaaliya uusan inta badan ku haboonayn beerista baradhada ama bataatiga, waxaa jiri kara meelo qabow oo heerkulka u saamaxayo beerista.
Dalagyada aad loo beerto guud ahaan Soomaaliya iyada oo aan siday u kala badanyihiin aanan loo soo qorin waxaa ka mid ah: moos, liin, cambe, galay, babaay, qare, basal, sisin, digir, bocor, barbarooni, dabacaseeye, baradho (gobolka Bay), tuun, saytuun iyo mirro kale.
Qodaal masno oo ah wax ku cusub beeralayda Soomaaliyeed ayaa ah habka midaynta dalaga iyo xoolaha nool. Wadamada caalamka intooda badan ee leh dhulbeeraad isla markaane xoolo dhaqdso, beeralaydooda way mideeyaan falashada beeraha iyo xanaaneynta xoolaha nool sida lo’da iyo digaag oo sahal u ah in lagu xanaaneeyo beerta dhexdeeda ama agteeda.
Hilib iyo caano ayaa loo xanaanayn karaa xoolaha sidaas oo kale lagu dhafo beerta. Badiyaa lo’da dhul biyo badan kama maaranto sidaas darteedna ay sahal u noqon karto maaraynta beer iyo tiro lo’ ah.
Dowlada Soomaaliya ka dib markii ay qaramaysay hantidii wadanka ee gumaystaha maamulayay, ayaa dhowr sano gudahood waxay dowlada suuqiyo cusub u iibgaysay dalagyadii saa’idka (surplus) ku noqday wadanka. Intii ka horaysay 1970yadii, wadanka Talyaaniga unbaa qaadan jiray inta badan waxyaabaha sida aadka ah loo dhoofiyo sida mooska.
Jaamada Ummada laanteeda Beeraha ee Kulyada Beeraha Lafoole ama Agrario ayaa qayb libaax ka qaaadatay helitaanka farsamo cusub oo la xariirta beeraha.
Aqristoow adigana maxaad nagu soo kordhil laheed si aan ugu faa`iideyno umadeena, una tusno in anagoo dhulkeena wax ka qabsano eey ka qeeyr & niyad fiican tahay anagoo dhul aadan leheen wax ka qabsatid, waanu wada ognahay qurbajooga Soomaaliyeed meel walba oo eey joogaanba in eey habeen & maalin u ooynayaan dalkii hooyo “Dal aadan laheen dareen ku joog waaye” Marka maxaa tala ah oo aan ku wacyi galinaa umadeena si eey aayaheeda ugu sii baaran dagto..